प्रतिनिधी सभा तथा प्रदेश सभाको प्रथम चरणको निर्वाचन यहि मंसीर १० गते एक दुई स्थानका छिटफुट घटना बाहेक शान्ति पुर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन यहि आउँदो मंसीर २१ गते हुँदैछ । रुपन्देहीको कुरा गर्दा रुपन्देही क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधी सभा सदस्य पदमा संयुक्त लोक तान्त्रिक गठबन्धन बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रीकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोरा को उम्मेदवारी परेको छ त्यसैले पनि यहाँको निर्वाचनलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
पाल्पाको तानसेन मा विक्रम सम्वत २००७ सालमा जन्मनुभएका दीपक बोहोरा २०३७ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचनमा रुपन्देहीबाट निर्वाचित हुनु भएको थियो । यहाँका जनताले उहाँलाई पटक पटक जनमत दिएर यस क्षेत्र बाट निर्वाचित गरेर पठाएका छन । निर्वाचित गराएर पठाए पछि यहाँका जनताले उहाँ बाट विकास निर्माणका कामहरु कत्तिको उपभोग गर्न पाए , मंसीर २१ को निर्बाचनमा उहाँका के के एजेण्डा हरु छन, यीनै विविध विषयमा स्वास्थ्य मन्त्री दीपक वोहोरा संग सिद्धार्थ एफएमका गोपाल बन्जाडेले गरेको कुराकानीको अँश ः
यो सविधान लाई लागु गर्नै र देशलाई बामपन्थीले ल्याएको सम्पूर्ण संंविधान परिवर्तन गरि जनताको अधिकार खोसिने जस्ता कृयाकलाप हुन नदिन यो गठबन्धन बनेको हो । ः मन्त्री बोहोरा
लोक तान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट रुपन्देही क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधी सभा सदस्य पदका लागी उम्मेदवार बन्नुभएको छ , घरदैलोमा कत्तिको व्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ धैरै ठुलो भएकोे छ । पहिला रुपन्देहीमा ७ वटा क्षेत्र थियो भने अहिले ५ वटा भएको र बुटवल देखि सुनौली सम्म जोडिएको हुनाले बढी भन्दा बढी प्रत्येक वडामा पुग्ने प्रयास भइ रहेको छ ।
नेपाली काग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको , उद्धेश्य बारे बताइदिनुस् न ।
 यो धेरै कठिनाइ र मेहनेतले आएको संविधान हो । बाम गठबन्धन बाट जनताको अधिकार पनि खोसिने,सविधान पनि कार्यान्वयन पनि नहुने र भोली गएर यो संविधान नै फेरिएर जनता का अधिकारलाई कुन्ठिट गराउने जस्ता सोँच बाम गठबन्धनको भएकाले नेपालको संविधानको रक्षा गरि नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउन नेपाली कागे्रसको नेतृत्वमा संयुक्त लोक तान्त्रिक गठबन्धन बन्यो ।जसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रि , राजपा लगायतका दलहरु, सबेै मिलेर संयुक्तm लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको हो । यो सविधान लाई लागु गर्नै र देशलाई बामपन्थीले ल्याएको सम्पूर्ण संविधान परिवर्तन गरि जनताको अधिकार खोसिने जस्ता कृयाकलाप हुन नदिन यो गठबन्धन बनेको हो । कोही अधिकारबाट बन्चित हुनु नपर्नै हिसावले अधिकारलाई व्यापक बनाउनका लागी यो गठबन्धन भएको हो ।
तर मन्त्री ज्यु , बाम पन्थीले त लोकतान्त्रिक गठबन्धन अपवित्र गठबन्धन हो भनेर आरोप लगाएका छन् त ?
 प्रजातन्त्रको धारमा बसेका पार्टीको गठबन्धन कुनै अपवित्र हुदैन । मलाई लाग्छ अपवित्र गठबन्धन बाम गाठबन्धन हो स्वार्थको गठबन्धन हो । हामीले गरेको लोकलान्त्रिक गठबन्धन स्वाभाविक निस्वार्थको गठबन्धन हो ।
विपक्षीहरुले त लोकतान्त्रिक गठबन्धन अपवित्र भएकाले नेताहरु जनताका घरदैलोमा पुग्न सकेका छैनन् भन्छन् नि ?
 यो आरोप नाराको आरोप हो । गठबन्धनको सन्दर्भमा भनु यहालाई, यस क्षेत्र बाट गठबन्धन गरेर नै अहिलेका यस क्षेत्रका बाम गठबन्धनका प्रतिनिधी सभाका उम्मेदवारलाई पनि त गठबन्धले नै यस अघि जिताएको हो । त्यो बेला पवित्र हुने र अहिले कसरी अपवित्र भयो । यो एउटा नारा को विषय हो । मलाई लाग्छ प्रजातन्त्रको रक्षाका लागी बनेको गठबन्धन लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो । तर उहाँ्हरुले यो सविधानलाई नै फेर्छु भनेर अगाडी बढ्नुभएको छ । त्यसैले लोक तान्त्रीक गठबन्धनलाई उहाँहरुले अपवित्र भन्नुभएको हो ।
तपाईलाई तत्कालिन रुपन्देही क्षेत्र नं २ बाट २०७० सालको सविधानका सभा सदस्य पदमा यहाका जनताले जनमत दिएर पठाए । यो अवधीमा यहाका जनताले तपाईबाट के पाए ?
यो जिल्लाको विकास निमाणको आधार खडा गरेको हुँ मैले । मैले भैलुभुज आयोजना यहाँ ल्याएर यस क्षेत्रको विकासको सुरुवात गरेको हुँ ।स्थायी संरचनाको विकास निमार्ण गरे त्यस्तै खाने पानी ,सिचाई विजुलीको आयोजना ल्याएको छु त्यसले पनि जनतालाई म प्रति विश्वास भएको हो । मैले हरेक वडामा केही न केही काम , विकास का कार्य गरि नै रहेको छु । एक आयुडिपिको आयोजना सिद्धार्थैनगरमा रहेको आधुरो आयोजनालाई पुन सुचारु गर्न पहल गरे । रुपन्देहीको चिल्हीया र मैनहिया जोड्ने पक्की पुलको पनि शिलान्यास गरी काम सुचारु गरेको छु । पडसरीमा खानेपानीको , सिचाँइको , नालाको विकास , बाटो घाटोका लागी पनि कार्य गरे । यसक साथै मठमन्दिको निमाण पनि गरियो । त्यस्तै भर्खरै मात्र ८४ बर्ष पुरानो भैरहवाको भिम अस्पताल लाई २५ शैया बाट ५० शैयामा स्तरोन्नती मन्त्री परिषद बाट गराउन सफल भएको छु । महिला , दलित समुदायका लागी कार्य गरेको छ ु र आगामी दिनमा पनि गर्ने छु । मेरो कार्यकालमा यहाका जनताले विकासको अनुभुति गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ ।
तपाई आपुर्ति मन्त्री हुदा भैरहवामा तेल भण्डारणको मुद्धा लाई लिएर जग्गा विवादमा तपाइको नाम पनि जोडियो नि तपाईले यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
नाकाबन्दी हुँदा देशले ९० दिनको तेलको भण्डारण क्षमताको स्थान चाहिन्छ भनेर तत्कालै त्यसलाई सरकारकै अनुमतिमा तेल र ग्यासको भण्डारका लागी सम्पुर्ण काम कारवाही गर्ने अधिकार सरकारले दिएको हो र जग्गा खरिद भएको हो । यसको सैद्धान्तिक काम गर्नै निर्णय म मन्त्री हुँदा भएको हो तर म मन्त्री बाट हटिसके पछि मात्र जग्गा खरीद भएको हो , यसको नितिगत कुरा म बाट भएको तर खरिद गर्ने काम सबै नेपाल आयल निगमको बोर्डले गरेको हो । त्यसैले यो आरोपको मैले खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था देख्दीन ।
२०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनका लाागी लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक ले कस्तो घोषणा पत्र जारी गरेको छ । ?
हाम्रो प्रतिबद्धता साझा हो । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको क्षेत्र नं ३ को क का देवी प्रसाद चौधरी र ख का हरिध्वज मल्ल को संयुक्त घोषणा पत्रमा रुपन्देही जिल्ला लाई ५ नं प्रदेशको राजधानी बनाउनका लागी प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौ । भारत र चिनको विचको सुनौलीको नाकालाई टान्जीटको रुपमा व्यापारिक मार्गको रुपमा राखेमा अर्थिक विकास गर्न सक्ने र भैरहवा गौतमबुद्ध विमानस्थालको निमार्णकार्यमा भएको अवरोध हटाएर १ वर्ष भित्रमा तयार गर्नै , बौद्धिष्ट तथा पर्यटकिय हिसावले पनि लैजाने , मोतीपुरमा मेडिकल कलेजको सञ्चालन गरी बचेको ठाउँलाई अ‍ैोद्योगीकरण गरेर लैजाने , क्रिकेट खेलमैदान स्थायी रुपमा निमार्ण गर्नै ऐजेण्डा मुख्य रहेका छन ।
तपाइले जारी गरेको घोषण पत्र अनुसार जनतालाई सुविधा दिनुहुन्छ ? जनताले त नेतामाथी शंक ागर्ने गरेका छन नी ?
दीपक बोहोराले काम गर्छ भन्ने विश्वास यहाका जनतामा रहेको छ र मैले कसरी हुन्छ विकास गरेर देखाएको पनि छु र आगामी दिनमा पनि देखाउने छ ु त्यसकारण जतिपनि घोषणा पत्रमा राखेको कुराहरु छन् पुरा गरेर देखाउने छ ु । सम्पुर्ण जनतालाई कुनै शंका नगर्न हुन अनुरोध गर्दछु ।
यहि मंसीर ११ गते मात्र भैरहवामा सम्पन्न भएको व्यापार मेला को बारेमा यहाको धारणा के छ ?
यस्ता मेलाहरु आयोजना हुनु अति राम्रो कुरा हो । तर मेला आयोजना स्थलमा नेता आएर भोट माग्ने गरेको कारणले मेला आयोजकले किन मेलालाई भोट माग्ने प्लेटर्फम बनाउनु भयो ? भन्ने मलाई लागेको छ । यस क्षेत्रको साँसद , मन्त्री यहाँ हुँदा हुँदै पनि हामीलाई निम्तो समेत गर्नुभएन । यहाँ न त नेपाली काँग्रेसलाइृ निम्तो गरियो न त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रीक लाई न त यहाँ भएका अन्य मधेशवादी दलहरुलाई । यो मेला मेला नभएर बाम गठबन्धनका प्रभावशाली नेता लाई बोलाएर उद्घाटन गर्नै नाममा भोट माग्ने र समापन गर्दा पनि बाम गठबन्धनको भोट माग्ने ठाउको रुपमा स्थापित गरियो ।
अन्तमा केही भन्नु छ कि ?
 अहिलेको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले उठाएको मुद्धा भनेको नेपाली जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने , सुरक्षित गर्नै नेपाली जनताले मेहनेतका साथ ल्याएको सविाधानलाई लागु गरेर भोली बन्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले देशलाइृ प्रगतीमा लैजाने हुँदा नेपाली जनताले हामीलाई साथ, र सहयोग गर्नुहुने छ र विकासको निमार्ण लाई तीव्रताकासाथ बढाउदै लैजानका लागी नेपाली जनताको पुर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने आशा गरेकोछु ।